Xaqiiqda: Isku dar ilaha xogta daqiiqado… No Code Looma Baahan Yahay! | Martech Zone
Axad, Oktoobar 8, 2017 Douglas Karr
Xogtu waa silos. Ganacsiga iyo IT-da waxay labaduba dalbanayaan aragti midaysan oo ku saabsan xogta si ay gacan uga geysato xal u helista caqabadaha ganacsi ee maanta jira. Warbixinnada bixiya aragtiyo mideysan oo ku saabsan xogta isku dhafan ayaa loo baahan yahay si dadku ay u eegaan macluumaad muhiim u ah ururradooda waxayna kalsooni geliyaan awooddooda fulinta iyo gaarsiinta macluumaadka saxda ah ee muhiimka u ah guusha shirkadda.
Xogta, si kastaba ha noqotee, waxay ku faaftaa nidaamyo isku xirnaan badan, mainframes, nidaamyada faylasha, dukumiintiyada xafiiska, lifaaqyada emaylka, iyo inbadan. Sababtoo ah xogtu iskumid ma ahan oo ganacsiyada wali waxay u baahan yihiin macluumaad mideysan, d ganacsiyada waxay qabtaan is-dhexgalka “swivel-chair” oo waxay abuuraan warbixinno “dhugmo iyo isbarbar dhig”. Waxay weydiiyaan hal silo oo ay u nuquliyaan natiijooyinka si ay u fiicnaadaan, waxay weydiiyaan silo kale oo ay ku dhajiyaan xogta si isdaba joog ah. Waxay ku celceliyaan hawshan illaa ay ka helayaan wax matalaya warbixinta ay sida aadka ah u doonayaan inay abuuraan. Warbixinta noocan ahi waa mid gaabis ah, oo gacan qabasho ah, aan la isku hallayn karin, khaladkuna u nugul yahay!
Ururada badankood waxay qirayaan in aaladaha iyo teknoolojiyada abuuray dhibaatada silo xogta aan lagu isticmaali karin xalka. Natiija ahaan, dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaan aragnay kororka keydka keydka macluumaadka ee NoSQL iyo teknoolojiyada la geeyay si ay gacan uga geystaan ​​isdhexgalka xogta si dhaqso leh iyo firfircoonaan badan. In kasta oo xog-ururintaan cusub iyo barnaamijyadan cusubi ay yareyn karaan waqtiga isku dhafka xogta marka la barbardhigo habab dhaqameedka, haddana dhammaantood waa kuwa wax dhisa oo waxay la yimaadaan caqabado kale oo ay tahay in laga gudbo markay tahay helitaanka xirfadaha lagama maarmaanka u ah horumarinta iyo la shaqee tiknoolajiyadaan. Waxaa jira carqalado badan oo ku dhafan hawshan oo ay ka mid yihiin cusbooneysiinta maareynta isbeddelka iyo hababka ganacsiga si loogu guuleysto bixinta natiijooyinka.
Xaqiiqda waxay bixisaa hab lagu dhexgalo xogta iyadoon la qorin wax lambar ah. Waxay rumeysan yihiin inay jirto hab fudud oo la isugu dhafan karo xogta, waana jiraan. Iyaga ayaa abuuray!
Kooxda injineernimada ee FactGem waxay qaadeen culeyska maaraynta kakanaanta isku dhafka si dadka isticmaala ganacsiyada aysan ku qasbaneyn. Hadda, ka doodista isdhexgalka xogta daruuri maahan inay ka bilaabato IT. Natiija ahaan, codsiyada isdhexgalka xogta ee FactGem waxaa loo isticmaali karaa in si dhaqso leh loogu dhex daro miisaanka xogta kala jaban si loo gaarsiiyo warbixinno mideysan oo ku saabsan xogta horey loo jaray.
Waxa ay ku timid waa inaan ku xallinay dhibaatadan aan macquul ahayn aragtida tiknoolajiyada, laakiin waxa aan runti siinayno waa xalka ganacsiga. Madaxa Megan Kvamme
Markii la isku dhafayo xogta, waxay ku bilaabayaan mala-awaalka in xogtaada horay loo qaabeeyay. Dad aad u caqli badan oo ka tirsan ururkaaga, oo ay u badan tahay iibiyeyaasha aad ka soo iibsatay codsiyada iyo xalka, ayaa abuuray moodelladan. Hay'adaha iyo cilaaqaadka aad daryeesho oo aad rabto inaad ku midoobaan noolaanshaha xogtaada. Waxay u egyihiin macaamiisha, amarrada, macaamillada, alaabada, khadadka wax soo saarka, bixiyeyaasha, tas-hiilaadka, iyo inbadan. Waxay rabaan inay furaan xogta hay'adahaas oo ay ku midoobaan warbixin soo gudbineysa aragtiyo ganacsi oo macno leh. Iyadoo FactGem, tani waa hawl fudud.
Haddii aad ku sawiri kartid hay'adaha iyo cilaaqaadka ururkaaga sabuurad, waxaad u isticmaali kartaa FactGem inaad ku dhex gasho xogtaada. Way fududahay.
Si aad xogta ula dhex gasho FactGem, ka bilow WhiteboardR. Codsigan, jiido oo hoos u dhig hay'adaha iyo cilaaqaadka si aad u abuurto qaab macquul ah oo loogu talagalay xogta isku dhafan adigoo "sabuurad" uga dhigaya biraawsarka. WhiteboardR, qeex sifooyinka aad rabto inaad ku biirto hay'ad kasta, oo waa inaad kaliya kudayasho waxa aad ubaahantahay, sida aad ugubaahantahay. Uma baahnid inaad ogaatid sifo kasta oo lala xiriirinayo hay'ad kasta kahor intaadan bilaabin. Uma baahnid inaad taqaanid dhammaan silsiladaha iyo ilaha aad aakhirka doonayso inaad ku milmaan. Dhaqanka ugu fiican ayaa ah inaad kubilaawdo abuurista nooc dhowr silos oo aad ogtahay inay ku bixin karto warbixin mideysan - iyo qiimo deg deg ah oo ganacsigaaga ah. Khariidadeyso hay'adahaaga, sifooyinka ay leeyihiin, iyo xiriirada ay wadaagaan midba midka kale. Xitaa waad abuuri kartaa qawaaniin ganacsi si aad u qeexdo waxa ka dhigaya hay'ad gaar ah iyo waxa kaarim ahaanta xiriirkeeda ay tahay inay la xiriirto hay'adaha kale ee la xiriira. Marka qaabkan la abuuro, waxaad geynaysaa tusaalaha si loogu isticmaalo MappR.
In kasta oo WhiteboardR kuu oggolaaneyso inaad adeegsato codsi si aad u qeexdo qaab ganacsi oo isku dhafan, midaysan, shirkad ku baahsan, MappR wuxuu kuu oggolaanayaa inaad khariidado silo kala duwan oo xog ah ku samayso moodel midaysan oo ah 'WhiteboardR'. MappR, waxaad ku baaraandegi kartaa ilaha xogta oo aad bilaabi kartaa inaad sameyso khariidado. Aynu dhahno ilaha ka imanaya hal silo waxaad leedahay sifo xikmad iyo silo kale, waxaad leedahay sifo xubin_id, oo waad ogtahay inay labaduba tixraacayaan macaamil. MappR ahaan, waxaad khariidayn kartaa labada astaamood sifo midaysan macmiil_id waxaad horey ugu qeexday qaabka mideysan ee WhiteboardR. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad khariidadeyso astaamaha aad daryeesho ee isha, MappR ayaa markaa ka soo dejisan karta feylasha shaashaddaas isla markaana si toos ah ayaa loogu dhex dari doonaa nooca 'WhiteboardR' waana isla markiiba lagu codsan karaa aragti midaysan Waad ku sii wadi kartaa khariidaynta ilaha oo aad u liqi kartaa xogta qaabkan illaa aad ka dhexgalayso xogta aad rabto aragtidaada midaysan.
Iyadoo loo yaqaan 'WhiteboardR' iyo 'MappR', xitaa waad keydin kartaa, nooc, oo aad dhoofin kartaa moodooyinka aad abuurto. Moodooyinkaani waxay leeyihiin qiimo taas oo ah inay noqdaan giraanta dikoodh ee ka caawinaya ganacsiga iyo IT-ga inay u gudbiyaan fahamkooda ku saabsan xogta ururka, sida ay tahay in loo isticmaalo, iyo sida loogu isticmaalo daafaha. Moodelladan ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay ka caawiyaan la socodsiinta la socodsiinta xogta cusub iyo dib-u-dejinta dadaallada si looga caawiyo dammaanad-qaadista guushooda.
Marka xogta la raro, BuildR waxay kuu ogolaaneysaa inaad si deg deg ah u sameysid shaashad fudud, oo la adeegsan karo oo ku saabsan xogtaada midaysan ee biraawsarka. ConnectR waxay kuu ogolaaneysaa inaad dejiso isku xiraha xogta webka ee loo yaqaan 'Tableau' iyo aaladaha kale ee BI si aad sidoo kale uga faa'iideysan karto qalabkan si aad uga warbixiso xogtaada hadda midaysan.
Sababtoo ah FactGem waxay qaadaysaa kor u qaadista culus ee isku dhafka xogta, iyo sababtoo ah waxaad kaliya u baahan tahay inaad ku daydo oo aad khariidayso waxa aad u baahan tahay, sida aad ugu baahan tahay, isdhexgalka xogta iyo gudbinta aragtida ayaa si aad ah u dhakhso badan. Tani maxay u egtahay nolosha dhabta ah?
Waa tan waxa Isku-dhafka Xogta Caadiga ah ee Xaqiiqdu u egtahay:
Xagaagii la soo dhaafay, Dukaan-qaade 500 oo Fortune ah ayaa u yimid Factgem, isagoo weydiisanaya caawimaad maxaa yeelay waxay adeegsanayeen CRM weyn oo ay ka soo jiidayeen xogta meelo kale si ay isugu dayaan inay aragti helaan. Saynisyahankooda Madaxa Xogta waxay u baahdeen inay si fudud isugu daraan dukaamada, ganacsiga elektarooniga ah iyo macluumaadka bakhaarka macluumaadka macaamiisha si ay u fahmaan "Waa kuma macaamiilku?"
FactGem waxay balan qaaday gaarsiinta 24 saacadood. Waxay ka dhisteen moodel isku xiran dhammaan dukaamada iyo macaamiisha, waxay soo bandhigeen aragtiyo cusub, waxayna ku sameeyeen 6 saacadood, ma ahan 24! Oo sidaas. . . Macaamiisha # 1 ee tafaariiqda ayaa dhashay. Waxay ka guureen inay fiiriyaan hal magaalo 6 saacadood gudahood iyagoo u fiirsanaya dalka oo dhan, in ka badan kumanaan dukaanno ah, tobanaan milyan oo macaamiil ah iyo terabytes oo xog ah - waxayna tan ku sameynayaan dhammaan shaqooyinka maalinlaha ah. Kuwa kale ee tafaariiqda, adeegyada maaliyadeed, iyo wax soosaarka ayaa sidoo kale hadda bilaabay inay arkaan oo ay gartaan faa'iidooyinka FactGem ee ururadooda.
Teknoolojiyadda ayaa horumar sameysay ilaa heer aysan ka sii ahaan doonin injineerada kaliya. Isdhexgalka xogta casriga ahi uma adka sida waaxdaada IT-ga ay jeclaan lahayd inaad aaminto. CTO Clark Richey
Moduleda 'FactGem's WhiteboardR' wuxuu isku xiraa ilaha xogta kaladuwan iyadoo aan la adeegsan wax lambar ah.
Booqo FactGem si aad waxbadan uga barato
Tags: Clark RicheyIsdhexgelinta xogtaxaqiiqdadhexgalkakhariidadMegan Kvammesabuurad